Global Voices teny Malagasy » Filipina : miady mafy ny mba ho velona ireo toerana fampielezampeon’ny vondrom-piarahamonina na eo aza ireo fanafihana sy zava-tsarotra · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 31 Oktobra 2019 16:58 GMT 1	 · Mpanoratra Mong Palatino Nandika Lauren RAJAOBELINA
Sokajy: Azia Atsinanana, Filipina, Fahalalahàna miteny, Media sy Fanoratan-gazety, Mediam-bahoaka, Politika, Tantara, Zon'olombelona, Rising Voices
Boky  iray navoaka tamin'ny 2018 no nanadihady ireo fanamby natrehan'ireo tambajotran'ny vondron'ny fampielezampeom-piarahamonina any Filipina. Niresadresahan'ity mpanoratra ity ny iray amin'ireo vondrona mpanohana ilay tetikasa boky ny amin'ny maha-zava-dehibe ny fisian'ny fampielezampeom-piarahamonina ao amin'ny firenena iray izay ny ankamaroan'ireo mpanao gazety maty novonoina  tao dia mpampita an'onjam-peo avy any amin'ny faritany ambanivohitra.
Fampitàna onjampeo ho an’ny rehetra na ho an’ny ‘vondrona voafetra’ ataonà vondrom-piarahamonina iray mikasika lohahevitra iray izay manan-danja amin-dry zareo ary mandrakariva dia ampitaina amin’ny alàlan’ny fampielezampeo tsy matanjaka (fampitàna onjampeo ho an'ny rehetra) na amin'ny alàlan'ny fanamafisampeo eny anivon'ny vahoaka (fampitàna amin'ny vondrona voafetra) no atao hoe fampielezampeom-piarahamonina. Manana endrika tranompokonolona eo an-tanàna ary mampiasa ny endriky fandaharana anaty fampielezampeo izany. Matetika dia samy mpikambana ao amin'ny vondrom-piarahamonina ny mpampita onjampeo sy ny mpiresadresaka. Raha toa ka mahavita mametraka toerana fampielezampeom-piarahamonina ny vondrom-piarahamonina, dia mandefa andiana fandaharana mitovy amin'ny ataon'ireo foibe hafa fampielezampeo ry zareo (oh : Radyo Sagada ). Raha tsy izany, dia afaka mametraka fanamafisam-peo eny anivon'ny vahoaka ao amin’ ilay vondrom-piarahamonina ry zareo ary matetika dia ora vitsy monja no andehanan'ny fandaharana (oh : Radyo San Roque ).
Aingam-panahy avy tamin'ny lova napetraky ny Tambajotra Tambuli ny asan'ny Kodao, hoy izy. Nitantana  tamin'ny fametrahana ny fampielezampeom-piarahamonina maherin'ny 20 tany amin'ireo tanàna ambanivohitra mitoka-monina manerana an'i Filipina, niaraka tamin'ny fanampian'ireo sehatra samihafa toy ny fampianarana ambony, ny fiangonana, ny fikambanana tsy miankina (ONG) ary ireo vondrom-piarahamonina izy tenany, ny Tambuli.
Olana faharoa ny momba ireo lalàna izay toa natao hanakivy ny fametrahana foibe fampielezampeon'ny vondrom-piarahamonina tsy miankina. Ohatra, na misy maherin'ny zato aza ireo fampielezampeo Radyo Natin  manerana ny tangoronosy amin'ireo foibe fampielezampeo -tsy matanjaka- an'ny Manila Broadcasting Company (MBC), dia tena vitsy ireo foibe fampielezampeo tena izy ho an'ny vondrom-piarahamonina tahaka ny Radyo Sagada. Tsy rariny raha ny tambajotra lehibe toy ny MBC omena hatetik'onjampeo sady ao amin'ny onjam-peo AM no ao amin'ny FM miaraka, nefa efa tsy azo atao intsony , ohatra ny mametraka foibe fampielezampeo any amin'ny faritr'i Metro Manila, na Cebu, na Iloilo, Davao sy ny hafa. Dia ahoana raha mba te-hanana ny foibe fampielezampeo azy manokana koa ireo Domagaty ao Antipolo ? [Domagaty dia vahoaka indizeny avy any amin'ny faritanin'i Rizal. Faritra any Rizal i Antipolo, ary any atsinanan'i Metro Manila].
Fahatelo, satria izy ireny tsy natao hitadiavam-bola, fananana sy ny vondrom-piarahamonina ihany no mitantana azy ary ampian'ny fikambanana tsy miankina amin'ny fanjakana, dia matetika iharan'ny fanafihana sy ny fanenjehana, izay mitarika ny fikatonany na ny tsy fahafahany mijoro ireo foibe fampielezampeom-piarahamonina. Nodorana  ny Radyo Cagayano ary notafihana tany Baggao,Cagayan ireo mpiasa tao aminy tamin'ny 2006, tsy tomombana noho ny fandrahonan'ny mpitandro filaminana sy ireo mpanao politika ny fahafahana miasa feno nataon'ny Radyo Sugbuanon ; nikatona noho ny fandrahonana sy ny fanenjehana tamin'ny Janoary 2019 lasa teo ny Radyo Lumad.  Ireo ONG izay manampy azy ireo dia haratsiana ary ny sasany aza novonoina na nogadraina.
Any anatin'ireo vondrom-piarahamonina, izay misy mponina manohitra ny fidirana sy ny fanitarana ny fitrandrahana harena an-kibon'ny tany na manohitra ny fankatoavana ireo tetikasa goavana izay mety handrava ny tranony na ny fivelomany, no misy ny Radyo Cagayano, Radyo Lumad , ary ny Radyo Sugbuanon . Niaraka niasa mandrakariva tamin'ireo vondrom-piarahamonina norahonana hafindra noho ny fanapariahany ireo olana sy ny fanomezana sehatra ireo mponina ao an-toerana mba hanaovan'izy ireo ny fitakiany ireo foibe fandefasana onjampeo ireo. io iraka io no ataon'ity ‘fanamafisana ny feon'ny vahoaka ‘ ity, izay nitarika ireo fanafihana mahatsiravina mikendry ireo izay milaza ny marina amin'ny fitondrana.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2019/10/31/143287/
 Radyo Lumad.: http://www.thisisplace.org/i/?id=a3eeac62-5279-47bd-bae6-4de9100cc653